Orange Madagascar: olona telo alefany hijery ny «Can 2019» | NewsMada
Orange Madagascar: olona telo alefany hijery ny «Can 2019»
Mpanjifa telo mirahalahy ny alefan’ny Orange Madagascar hijery ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra (Can 2019), any Egypta. Taorian’ireo fifaninanana mahakasika ity fifaninanana ity nokarakarainy ny nahazoana izany. Natolotry ny tale jeneralin’ny Orange Madagascar, i Michel Degland, omaly tetsy Ankorondrano, ho an’ireo mpandresy, ny tapakila handehanany hiatrika izany. Nanotrona izany ny solontenan’ny minisitry ny Serasera, Rakotondrazafy Lalatiana.
Raha tsiahivina, anisan’ireo nahazo izany Ralaivao Fety Harimanana, nahazo ny loka teo amin’ny fakana ny sarin’ny mpanohana na ny “Fan Of my country”. Teo koa Ramarosandy Marline Zosahaza, nahay nitantara, tamin’ny fandraisam-peo, ireo baolina mendrika tafiditra nandritra ny Can, tany aloha, na “Best of commentator”.
Hanainga, rahampitso alarobia, izy mirahalahy ireo, ary hipetraka amin’ny hotely kintana efatra, ny 27 – 30 jona ho avy izao. Hanatrika ny lalao hifandonan’ny Barea sy i Borondi izy ireo.
Mpandresy fahatelo Ralainaivo Herilanto Mamitiana Rayan, nandrombaka ny amboara tamin’ny “Tournoi national Orange Esport Experience» sy teo amin’ny «Tournoi PES 2019», natao ny asabotsy 15 jona. Ny 16 jolay ho avy izao izy no handeha ary hiatrika ny famaranana ny “Panafricaine Orange Esport Experience”, hatao ny 17 sy 18 jolay ho avy izao. Hijery ny famaranana ny “Can 2019” kosa izy. Hisy ny fiaraha-miasa eo amin’ny ORTM amin’ny fandefasana ny lalaon’ny Barea, eny Mahamasina sy eny Soarano ary any amin’ny faritra maro.
Ankoatra izay, hisy ny “Tournoi Orange kitra”, ho an’ireo ekipam-pokontany 24, hatao etsy Mahamasina, isaky ny asabotsy sy ny alahady. Fihaonana efa nanomboka ny 22 jona lasa teo.